မင်းသား Hugh Jackman ဟာ တကိုယ်တော် ရှိုးပွဲတွေကို ပွဲဦးထွက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် တချိန်တုန်းက ပထမဆုံး “X-Men” ရုပ်ရှင်မှာ Wolverine သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားခံရလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Daily Mail သတင်းရဲ့အဆိုအရ မင်းသား Jackman ဟာ လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ 02 ကဇာတ်ရုံမှာ မကြာသေးခင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ရှိုးအတွင်းမှာ ပရိသတ်တွေကို အခုလိုမျိုး ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Hugh က “သူတို့မျှော်လင့်ထားသလို ကိစ္စတွေ အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ ကျနော့် အနုပညာရဲ့ အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံး ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကနေ ဖယ်ရှားခံရလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် အရမ်းဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ မိန်းမ ရှိတဲ့ အိမ်ကို ပြန်ပြီးတော့ ကျနော် ညည်းတွားခဲ့တယ်။ ကျနော့် ဇနီး Deb ဆီမှာ ညည်းညူနေခဲ့ရတယ်”လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အိမ်ထောက်သက်တမ်း ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်ကြာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ဇနီး Deborra-Lee Furness က သူ့ကို ပြန်အာရုံစိုက်ဖို့ ဘေးနားကနေ ပြောပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မင်းသားက “သူက ၁ နာရီလောက် ကျနော်ပြောတာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားထောင်ပေးခဲ့တယ်။ သူက ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ယုံကြည်ဖို့ ပြောခဲ့တယ်။ ရှင်က အရာအားလုံး ဒီလိုတွေချည်းပဲဆိုရင် အရမ်းကို စိုးရိမ်နေတယ်တဲ့။ ဇာတ်ကောင်ဆီကိုပဲ ပြန်သွားပါ။ အဲ့ဒါကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ရှင့်ရဲ့ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကိုပဲ ယုံကြည်ပါလို့ပြောတယ်” လို့ ဇနီးရဲ့ ဖေးမပေးမှု အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၅၀ အရွယ်မင်းသားက “ကျနော့်အတွက်တော့ အဲ့ဒါအချစ်ပါပဲ။ သူက ကျနော့်ကိုကျနော် အပြည့်အဝ မယုံကြည်တဲ့ အချိန်မှာတောင် ကျနော့်ကို ယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့သူ တယောက်ပါ။ ဒီဖျော်ဖြေပွဲက Deb နဲ့ ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
“The Greatest Showman” ရုပ်ရှင်စတား မင်းသား Hugh ဟာ “Hugh Jackman: The Man. The Music. The Show” အမည်ရှိ ဖျော်ဖြေပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: Hugh Jackman, Wolverine, X-Men